केटा वा केटी कसले बढी हस्तमैथुन गर्न रुचाउछन ? | दर्पण दैनिक
केटा वा केटी कसले बढी हस्तमैथुन गर्न रुचाउछन ?
प्रकाशित मिति: २०७७ श्रावण १६ गते ०९:३६
हस्तमैथुन किशोरावस्थामा हुने आम यौन व्यवहार हो । यद्धपी कतिपयमा यो व्यवहार पाको उमेरसम्म रहने गर्दछ । आफ्नो यौन उत्तेजना शान्त पार्ने सशक्त, सुरक्षीत र गतिलो माध्यम भएकोले अधिकांश महिला तथा पुरुषले यो व्यवहार रोज्ने गर्दछन् । त्यसो त सन्तुलित हस्तमैथुनले शारीरिक तथा मानसिक फाईदा हुने बताइन्छ । तर लत बसिसकेका कतिपयले हस्तमैथुनकार्यमा सिमा नाघेर सहभागी हुनेगर्छन । यसले स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्ने विज्ञहरुको दावी छ । पुरुष तथा महिला दुबैले आफ्नो यौनांङ चलाएर हस्तमैथुनको स्वाद लिने गर्छन् । तर अत्यधिक हस्तमैथुनमा लिप्त हुने महिलाहरुमा शारीरिक समस्या हुने बताइन्छ ।
भारतमो १४ देख १७ बर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीमा गरिएको गरिएको राष्ट्रिय सर्वेक्षणले ४८ प्रतिशत केटीहरु र ७३ प्रतिशत केटाहरुले हस्तमैथुन गर्ने गरेको देखाएको छ । त्यस्तै २५ देखि २९ बर्ष उमेरका युवाहरुमा गरिएको सर्भेक्षणमा ८५ प्रतिशत महिला र ९४ प्रतिशत पुरुषले हस्तमैथुन गरेको पाइएको छ । त्यसैले केटाहरु बढी हस्तमैथुन गर्छन । यद्धपी केटीहरुको संख्या पनि कम देखिदैन् ।